Ukuthetha Ngezinto Emtshatweni: Indlela Yokuthetha Ngeengxaki
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseMerika Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Xa wena neqabane lakho nithetha ngeengxaki, ngaba nithi nigqiba nibe ningavani? Ukuba kunjalo, ninako ukuphucula. Noko ke, umele uqale wazi izinto ezithile ngendlela ezahlukeneyo athetha ngayo amadoda nabafazi. *
Abafazi ngabantu abathanda ukuthetha phandle ngengxaki, ngaphambi kokuba beve isicombululo. Phofu ngamanye amaxesha ukuthetha nje ngengxaki kuba sesona sicombululo kubo.
“Ndiye ndizive ngcono emva kokuba ndimxelele umyeni wam indlela endivakalelwa ngayo, aze andive. Emva kokuba ndithethile, ndiye ndixole kwimizuzu nje embalwa.”—USirppa. *
“Andixoli xa ndingafumananga thuba lakumxelela umyeni wam eyona ndlela ndivakalelwa ngayo. Ukuthetha phandle kundenza ndiyilibale loo nto ibindikhathaza.”—U-Ae-Jin.
“Njengoko ndithetha, ndihlalutya nto nganye eyenzekileyo kuba ndizama ukufumana oyena nobangela.”—ULurdes.
Amadoda athanda ukuza nesicombululo. Siyaqondakala isizathu soko, kaloku xa indoda ize nesicombululo iziva ilulutho. Ukucombulula iingxaki yindlela ebonisa ngayo umfazi wayo ukuba ingamnceda xa esengxakini. Amadoda aye adideke xa isicombululo sawo singamkelwa. Umyeni ogama linguKirk uthi: “Ndiye ndingasiqondi isizathu sokuba uthethe ngengxaki xa ungafuni sicombululo!”
Incwadi ethi The Seven Principles for Making Marriage Work ilumkisa ngelithi: “Qala uve ngaphambi kokuba ucebise. Umele ulazise iqabane lakho ukuba uyavelana nalo ibe uyiqonda kakuhle indlela elivakalelwa ngayo ngaphambi kokuba uze nesicombululo. Amaxesha amaninzi umfazi wakho akafuni sicombululo, ufuna nje ummamele kakuhle.”
Madoda: Ziqheliseni ukuphulaphula ngovelwano. Umyeni ogama linguTomás uthi: “Ngamanye amaxesha ndiye ndicinge ukuba ‘akukho nto ndiyiphumezileyo’ ngokuphulaphula. Kodwa, amaxesha amaninzi eyona nto ifunwa ngumfazi wam kukuba ndimphulaphule.” Umyeni ogama linguStephen uyavuma. Uthi: “Ndikufumanisa kusebenza ukuphulaphula de agqibe umfazi wam xa ezityand’ igila. Amaxesha amaninzi, xa egqiba uye athi uziva ngcono kakhulu”
Zama oku: Xa uphinda ufuna ukulungisa ingxaki nomfazi wakho, kulumkele ukumnika icebiso engalicelanga. Mjonge emehlweni, kwaye ummamele kakuhle xa ethetha. Nqwala, umbonise ukuba uyavuma. Kuphinde oko akuthethayo ukuze abone ukuba ukunye naye. “Ngamanye amaxesha umfazi wam ufuna nje ukwazi ukuba ndiyamqonda kwaye ndikunye naye,” itsho njalo indoda enguCharles.—Umgaqo weBhayibhile: Yakobi. 1:19.
Bafazi: Waxeleleni amadoda enu, oko ningathanda akwenze. “Sisenokulindela ukuba amaqabane ethu akwazi oko sikufunayo, kodwa ngamanye amaxesha kufuneka sithethe,” utsho njalo umfazi ogama linguEleni. “Kukho into endiphazamisayo kwaye ndingathanda ukuba undimamele. Andifuni ukuba uyilungise, kodwa ndifuna nje uqonde indlela endivakalelwa ngayo,” ucebisa njalo umfazi onguYnez.
Zama oku: Ukuba umyeni wakho ukunika izicombululo ungamcelanga, sukucinga ukuba akakhathali. Isenokuba uzama ukunceda. Inkosikazi ekuthiwa nguEster uthi: “Kunokuba ndikhawuleze ndidikwe, ndiye ndizixelele ukuba umyeni wam undikhathalele yaye uyafuna ukundimamela nokundinceda.”—Umgaqo weBhayibhile: Roma 12:10.
Kumadoda nabafazi: Sidla ngokuphatha abanye ngendlela esifuna basiphathe ngayo. Kodwa ke, ukuze uyilungise kakuhle iingxaki umele ucinge ngendlela iqabane lakho ebelingathanda ukuphathwa ngayo. (1 Korinte 10:24) Umyeni ekuthiwa nguMiguel uthi: “Ukuba ungumyeni ziqhelise ukumamela. Ukuba ungumfazi kulungele ukuphulaphula izicombululo ngamanye amaxesha. Xa nikulungele ukuncama okuthile, nobabini niyazuza.”—Umgaqo weBhayibhile: 1 Petros 3:8.
^ isiqe. 4 Izinto esiza kuthetha ngazo, azisoloko zinjalo kweminye imitshato Kodwa ke, imigaqo esiza kuthetha ngayo kweli nqaku, inganceda nawuphina umntu otshatileyo aqonde indlela yokuthetha neqabane lakhe.
^ isiqe. 7 Amagama atshintshiwe kweli nqaku.
‘Umele ukhawuleze ukuva, ucothe ukuthetha.’—Yakobi 1:19.
“Cingani nto-nye nonke, nivelane.”—1 Petros 3:8.
LININI IXESHA ELIFANELEKILEYO LOKUTHETHA?
IBhayibhile ithi: ‘Ilizwi elithethwa ngexesha elifanelekileyo—hayi indlela elilunge ngayo!’ (IMizekeliso 15:23) Enyanisweni, kunjalo naxa lingathethwanga.
“Kukho unxibelelwano phakathi kwento ethethwa ngexesha elingafanelekanga kunye nokuxambulisana.”—USirppa.
“Sukuthetha ngezinto ezibalulekileyo xa ulambile okanye udiniwe.”—UJulia.
“Ngenye imini ndathetha nomyeni wam ngento eyayindikhathaza, esandul’ukungena endlwini. Ndathi ndingekagqibi, kwathi qatha into yokuba isenokumenza adinwe okanye acaphuke lento! Ndamxelela ukuba ndakuphinda ndithethe naye emva kokuba sityile. Wandibulela, saza sathetha emva kokutya sizolile kwaye sikwazi nokucinga kakuhle.”—ULurdes.